Mkpado: holograph | Martech Zone
Ọdịnihu nke mmekọrịta onye ọrụ: Na-abụghị Touchscreens
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Shop Smart na-ekwu banyere odinihu nke ihu onye oru karia imetu ihuenyo. Ikekwe onye ọrụ ntanetị kachasị elu m na-eji Apple Watch m taa. Nchikota nke otutu aka, nsogbu, bọtịnụ, na dials di mgbagwoju anya. Na mkpịsị aka aka m, ọ bụghị mgbe niile ka ọ bụ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ. Obi dị m ụtọ banyere ọdịnihu! Mmekọrịta Onye Ọrụ Ọdịnihu na ihu Shop Smart na-akọwapụta teknụzụ ụfọdụ ndị nọ na njedebe nke ịgbanwe mmekọrịta onye ọrụ: Holographs - Microsoft